Chery ACTECO Engines မျိုးဆက်သုံးဆက်လုံးကို သုံးလာတဲ့ ၈ သန်းကျော်သောအသုံးပြုသူတွေက Chery ACTECO အင်ဂျင် တွေကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေ
မျိုးဆက်သုံးဆက်ရှိပြီဖြစ်သည့် ACTECO engines မှာ တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ထားသော အင်ဂျင်များထဲတွင် ထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်နေသည်ဟု Chery၏ တရုတ်ဗဟိုပြုချက် စံပြ ၂၁ နှစ်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခရီးစဉ် က ပြသနေသည်။
Chery ACTECO အင်ဂျင်များ၏ ထူးခြားသောအချက်မှာ သုံးစွဲသူပေါင်း ၈ သန်းကျော်ကို 0.8 L မှ 4.0 L သို့ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာသည့် ကွဲပြားသော အင်ဂျင်စီးရီးများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသည်။ Chery အင်ဂျင်ထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ကျော်သို့တင်ပို့ခဲ့ပြီး အမေရိက၊ ဂျပန်၊ ဂျာမနီနှင့် အခြားမော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းများသို့ သီးခြားစီတင်ပို့ခဲ့သည်။
Chery သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှစ၍ ကမ္ဘာသို့တင်ပို့သည့် ပထမဆုံးတရုတ်ကား အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအသုတ်ဖြစ်သည့် Chery ကားများကို Tianjin ဆိပ်ကမ်း မှတဆင့် ဆီးရီးယားသို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် Cheryသည် ပြည်ပစျေးကွက်တွင် လွှမ်းမိုးမှု အများဆုံး အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး ပို့ကုန်တင်ပို့မှုသည် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်ကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာအနှံ့ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၁၅၀၀နီးပါးကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် အပြင် ၁၇ နှစ်ဆက်တိုက် တရုတ်မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ်များ၌ လူစီးကားတင်ပို့မှုတွင် နံပါတ် ၁ နေရာတွင်ရှိပြီး စုစုပေါင်းတင်ပို့မှုသည်ယူနစ် ၁.၆သန်းကျော် ရှိသည်။
ပထမဆုံးအသုတ် Chery ကားများကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် Tianjin ဆိပ်ကမ်း မှတစ်ဆင့် ဆီးရီးယားသို့တင်ပို့ခဲ့သည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါသည်ကားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသော်လည်း Chery Group သည်ယခုနှစ်မှစ၍ ရောင်းအားလျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ Chery သည် ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းအတွက် နိုင်ငံခြားနည်းပညာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပထမဆုံးသောအင်ဂျင်ကို အောင်မြင်စွာဖြန့်ချိပြီးတဲ့နောက် Chery ဟာ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်မှုအတွက် နည်းပညာရှာဖွေရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယွမ် ၂ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီး Chery ACTECO အင်ဂျင်၏ ပထမမျိုးဆက်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင်အင်ဂျင် ဖြစ်လာသည်။ ပထမမျိုးဆက် ACTECO စီးရီးအင်ဂျင်များသည် 0.8L မှ 2.0L အထိစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထိုအချိန်က Fulwin, Cowin နှင့် QQ ကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်မော်ဒယ်များတွင်အသုံးပြုသော Chery သည် အဓိကအင်ဂျင်နည်းပညာကို အမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
Photo:The First Engine of Chery Rolling off the Production Line on May 18, 1999
ဓာတ်ပုံ - ၁၉၉၉ ခုနှစ်မေလ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ထုတ်လုပ်သောလိုင်းကို ချယ်ရီ၏ပထမဆုံးအင်ဂျင်တပ်ဆင်ခြင်း
ဓာတ်ပုံ - Chery’s ACTECO စီးရီး၏ပထမမျိုးဆက်အင်ဂျင်
ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဒုတိယမျိုးဆက် Chery ACTECO အင်ဂျင်များ
ဒုတိယမျိုးဆက် Chery ACTECO စီးရီးအင်ဂျင်ကို ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် တီထွင်ခဲ့သည်။ သိသိသာသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ အင်ဂျင်သည် စွမ်းအင်၊ လောင်စာဆီသက်သာစေမှုအပိုင်းတွင် တိုးတက်မှုများရှိလာပြီး ပထမမျိုးဆက်အင်ဂျင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်ကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။ အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်း ကိုယ်တိုင်က တည်ဆောက်ပုံ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး ထိုအချိန်က အခြားကုမ္ပဏီများက ထုတ်လုပ်သောအင်ဂျင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုပေါ့ပါးလာသည်။ ဒီအင်ဂျင်အသစ်ကို Chery Arrizo နှင့် Tiggo စီးရီး အမျိုးမျိုးဖြင့်တပ်ဆင်ပြီး 1.6DVVT / 1.5DVVT / 1.0TCI / 1.5TCI အမျိုးအစားမျိုးစုံဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
Photo :The second-generation engine of Chery's ACTECO series
ဓာတ်ပုံ - Chery’s ACTECO စီးရီး၏ဒုတိယမျိုးဆက်အင်ဂျင်
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သွားရာလမ်းကို ဆက်ရမည်ဆိုလျှင် Cheryသည် ၎င်း၏အင်ဂျင်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ထပ်ဆင့်နည်းပညာဖြင့် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် တတိယမျိုးဆက် Chery ACTECO စီးရီးအင်ဂျင်များကို ပထမဆုံး 1.6TGDIဖြင့် တီထွင်ခဲ့သည်။ အင်ဂျင်သည် စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံး ၁၄၅ ကီလိုဝပ်နှင့်အကောင်းဆုံး ၂၉၀ N.m အရုန်းအဆွဲကို ပေးစွမ်းသည်။ ထိုအချိန်က အခြားမျိုးကွဲများသည် Chery မော်ဒယ်များတွင် ရရှိနိုင်သော 1.5TGDI နှင့် 1.2TGDIတို့ ပါ၀င်သည်။ ထို့အပြင် ၃၇.၁% အပူစွမ်းအင်နှင့်အတူ တရုတ်ထုတ်အင်ဂျင်များတွင် ဆက်လက် ဦးဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Chery ၏အဓိကနည်းပညာ ၅ခုကိုပထမဆုံး အသုံးပြုသည်။ iHEC(smart)လောင်ကျွမ်းခြင်းစနစ်၊ လျင်မြန်စွာအပူစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ၊ လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှု မြှင့်တင်နည်းပညာ၊ ပွတ်တိုက်မှုလျှော့ချခြင်းနည်းပညာနှင့် ပေါ့ပါးစေသော နည်းပညာတို့ ဖြစ်ပါသည်။
1.6TGDI ဟာ ပိုမိုပေါ့ပါးလာပြီး လောင်စာဆီသက်သာစေပြီးစွမ်းအင်ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်းကြောင့် 2019 သည် Chery အတွက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ All-Aluminum ဆလင်ဒါဘလော့များဖြင့်အစားထိုးခြင်း၊ မော်ဂျူးပုံစံပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းကောင်းမွန်မှုတို့ဖြင့် အင်ဂျင်သည် ယခင်မျိုးဆက်ထက် ၂၁ ကီလိုဂရမ်ပိုမိုပေါ့ပါးလာခဲ့သည်။ Chery ACTECO 1.6TGDI အင်ဂျင်ဟာ 'တစ်နှစ်တာထိပ်တန်းအင်ဂျင်ဆယ်မျိုး' ဆုအတွက်လည်း ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ နှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာပဲ Chery ၏ 2.0TGDI အင်ဂျင်ကိုပုံစံအသစ်များခြင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Photo :The third-generation engine of Chery's ACTECO series
ဓာတ်ပုံ - Chery’s ACTECO စီးရီး၏တတိယမျိုးဆက်အင်ဂျင်
Photo :Chery ACTECO 1.6TGDI engine thermal efficiency exceeds 37.1%
ဓာတ်ပုံ - Chery ACTECO 1.6TGDI အင်ဂျင်အပူစွမ်းအင်သည် ၃၇.၁% ထက်ကျော်လွန်သည်။
Cheryသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးသောမော်တော်ကားကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ ဂီယာဘောက်စနစ်၊ Chassis ၊ အင်ဂျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS) နှင့် ကားပလက်ဖောင်းနည်းပညာ တို့ကို လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့်ကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် နည်းပညာကို ဦးစားပေးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရှေ့တန်း ဖြစ်လာသည်။ Cheryသည် စွမ်းအင်နည်းပညာ၊ ကားပလက်ဖောင်းနည်းပညာ၊ စွမ်းအင်အသစ် ၊အသိဉာဏ်ရှိသောကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ကိုယ်တိုင်အလိုအလျောက်မောင်းနှင်မှုနည်းပညာ စသည့် အဓိကနည်းပညာနယ်ပယ်များတွင် အောင်မြင်မှုရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Super Seven Stars အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရောင်းချမှုကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင် ဆုများရရှိပြီးဖြစ်သည့် KIA၊ Peugeot နှင့် Chery ကားများကို တင်သွင်းရောင်းချပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်Chery မော်တော်ယာဉ်နှင့်Super Seven Stars တို့သည် Cloud တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ Chery အမှတ်တံဆိပ်သည် SKD ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းများထူထောင်ရန်မဟာဗျူဟာ မြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားအားဖြင့်မြန်မာပြည်ဈေးကွက်အတွင်းသို့တရားဝင် ၀င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Chery Automobile Co. , Ltd. ကို ၁၉၉၇ တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၂၀ အတွင်း Chery သည်လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအမြဲတစေပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ တရုတ်၊ ဂျာမနီ၊ အမေရိကန်နှင့်ဘရာဇီးတို့တွင် R&D စင်တာများကိုအများအပြားတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ R&D အဖွဲ့ကိုလူပေါင်း ၅၅၀၀ ကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ဘက်စုံ နည်းပညာနှင့်ထုတ်ကုန် R&D စနစ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Chery သည် Arrizo, Tiggo နှင့်အဆင့်မြင့် EXEED အမှတ်တံဆိပ်မော်တော်ယာဥ်များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ရောင်းအား ၈.၃ သန်းကျော်ဖြင့်အောင်မြင်စွာဖန်တီးရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ Chery သည် နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံ ၈၀ ကျော်ကို တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းပို့ကုန်ပမာဏ ၁.၆ သန်းကျော်ရှိသည့် အရောင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ၁၅၀၀ ကျော်ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၁၈ နှစ်အတွင်း လူစီးကားများကို အကြီးမားဆုံးတင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ https://www.cheryinternational.com/ သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
The second generation of the Chery ACTECO series engine was developed in 2009. With significant breakthrough in development, the engine achieved comprehensive progress in power and fuel economy, and lower emissions compared to the first-generation engine. The block itself became more optimized in structure, as well as being lighter, compared to engines being produced by other manufacturers at the time. This new engine was assembled with the various Chery Arrizo and Tiggo series, and also available in 1.6DVVT/1.5DVVT/1.0TCI/1.5TCI.
About Super Seven Stars
Super Seven Stars Public Company Limited business is centred on the sale of the award-winning KIA, Peugeot and Chery brand in the automotive section. In 22nd September 2020Chery Automobile and Super Seven Stars has signed the Agreements of strategic cooperation on Cloud. Both parties reached consensus on the cooperation in Myanmar. It marks that Chery brand enter Myanmar market formally through the signing ceremony of strategic cooperation to bring SKD production and set-up the brand distribution channels in the country.
Chery Automobile Co., Ltd. was founded in 1997. It isaglobalized automobile brand located in China. Over the past 20 years, Chery has always insisted on independent innovation, established R&D centers in China, Germany, United States and Brazil. It also has establishedaglobal automotive R&D team of more than 5,500 people，thus gradually establishing the holistic technology and product R&D system. In this way, Chery has successfully created product brands such as Arrizo, Tiggo, and high-end EXEED brand with cumulative global sales of more than 8.3 million units. Chery has exports in more than 80 countries and regions, establishing more than 1,500 sales and service outlets with more than 1.6 million accumulative export volume, remaining the biggest exporter passenger vehicles in China for 18 years inarow.